Raysal Wasaare Cumar oo Baarlamaanka ka codsay 10 maalmood oo dheeraad ah - Wargane News
Home Somali News Raysal Wasaare Cumar oo Baarlamaanka ka codsay 10 maalmood oo dheeraad ah
Goor dhaweyd Waxaa si rasmi ah u furmay kulankii Baarlamaanku ku balan sanaayeen ansixinta Golaha wasiirada Cusub ee dowladda federaaka, waxaana soo gaaray xarunta inta badan xildhibaanada federaalka, kuwaas oo gaaraya 230 Xildhibaan.
Raysal wasaare Cumar C/rashiid oo hadal kooban ka jeediyey xarunta ayaa guddoonka Baarlamaanka iyo xildhibaanada ka codsaday in ay siiyaan muddo 10 maalmood ah si uu u soo dhameystiro golahiisa wasiirada oo ay dhiman yihiin wasiiro ku xigeenadii iyo wasiiru dowlayaashii xukuumadiisa.
Cumar C/rashiid ayaa muddo kordhintan sidoo kale ku sababeeyey in uu la tashi iyo soo magacaabida xukuumada dhamaystiran u horkeeni lahaa baarlamaanka Isagoo sheegay in uu baarlamaanka latashi ugula imandoono xubnaha ka dhiman golahiisa wasiirada.
Xildhibaanada ayaa buuq iyo bulhan ku soo dhaweeyey codsiga raysalwasaaraha, waxaana Xildhibaanada dejiyey Shirguddoonka oo sheegay in ay ka doodayaan codsigaas. Cumar Cabdirashiid waa isaga soo baxay baarlamaanka, haddana waxaa Xildhibaanaduu ay ka doodayaan sidii ay codsigaas labaad ka yeelayaan, waxaana muuqata in ay si weyn ugu kala aragti duwan yihiin.
Somaliland: Madaxweyne Silaanyo oo shacabka ku Hambelyeeyay Bisha Ramadaan
Somaliland: “Mucaaridka Waxaan Leeyahay Waraaq Yar oo Aanay Waxba ka Jirin Wakhti ha ku Luminina ”